Mareykanka oo sheegay in Saraakiil Shabaab lagu dilay Gobolka Baay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Mareykanka oo sheegay in Saraakiil Shabaab lagu dilay Gobolka Baay
Mareykanka oo sheegay in Saraakiil Shabaab lagu dilay Gobolka Baay
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaaradda Afrika (AFRICOM) ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka oo Khamiistii ka dhacay deegaanka Saaxa-weyne ee Gobolka Baay lagu dilay Saraakiil ka tirsanaa Ururka Al Shabaab.
General Dagvin Anderson oo ka tirsan Taliska AFRICOM ayaa sheegay in qiimayn la sameeyay lagu ogaaday in duqaynta lagu dilay shan xubnood, oo Saraakiil ay ku jiraan.
General Dagvin Anderson ayaa tilmaamay in Saraakiishaasi ay fududeeyeen maalgelinta, hubka iyo inay dagaalka iyo qaraxyada sii wadaan dagaal-yahanada Al Shabaab.
“Weerarka waxaa lala beegsaday hoggaamiye-yaal Al Shabaab ah oo la yaqaan, kuwaa oo fududeeyey maalgelinta, hubka, maleeshiyada iyo qaraxyada. Mid ka mid ah wuxuu ku lug lahaa weerar horey loogu qaaday Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida.” Ayuu yiri General Dagvin Anderson.
General Dagvin Anderson ayaa xusay in sii wadista weerarada joogtada ee lagu kala dhantaallaayo Shabaabka, ay muujineyso ballanqaadkoodii ahaa in hawlgalku sii socon doono, xitaa haddii Ciidamada Mareykanka ka baxaan Somaliya.
“Inaan sii wadno kala dhantaalka Shabaab anaga oo adeegsaneyna weeraro joogto ah, waxay muujineysaa inaan weli sii wadno ballanqaadyadii aan u sameynay saaxiibadeena.” Ayuu sii raaciyay Jananka.
Mareykanka ayaa dardargeliyay weerarada dhinaca cirka ee ka dhanka ah maleeshiyada Al Shabaab, xilli Ciidamada Mareykanka ay bilaabeen wejiga hore ee ka bixitaankooda dalka.
Mareykanka ayaa bishii December sheegay in ciidamadiisa ay ka hawlgeli doonaan saldhigyadooda ku yaala dalalka Jabuuti iyo Kenya, isla-markaana ay sii wadi doonaan weerarada lagu bartilmaameedsanayo maleeshiyada Al Shabaab.
Previous articleMadaxda Qaranka oo ka qaybgalay munaasabad lagu soo xiraayay tartanka Dowlad Goboleedyada
Next articleCali Guudlaawe oo maanta safarkiisii ugu horeeyay ku tagaya Muqdisho